जनतापाटी बुधबार, मंसिर १७, २०७७ मा प्रकाशित
बलेवा । बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाम बागलुङ बजारबाट भौतिक दूरीका हिसाबले नजिकै रहेको गाउँपालिका हो काठेखोला गाउँपालिका । साविकका सात ओटा गाउँविकास समितिलाई एकीकृत गरेर बनेको गाउँपालिकाको आयस्रोतको मुख्य आधार हो कृषि र पर्यटन । मध्यपहाडी लोकमार्गले फेरो हालेको गाउँपालिकामा नगन्य मात्रामा पक्की सडक छ । वडा अनुसारको विषेशता रहेको गाउँपालिकाका सबै कुना कन्दरामा सडक त पुगेका छन् तर ती सडकहरुको व्यवस्थापनको काम भने बाँकी नै छ ।
खानेपानी, सिँचाइ र कृषि उपजको बजारीकरणमासमेत गाउँपालिकाले बेला बेलामा समस्या भोग्दै आएको छ । यहाँ धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान र खेल पर्यटन समेतको विकास शुरु भएको छ र यसबाट यहाँका पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । सांस्कृतिक रुपमा सम्पन्न गाउँपालिकाले विकासको गति लिन थालेको धेरै भएको छैन । सीमित स्रोत साधनको उपयोगले मात्रै पनि जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम भए कि भएनन् ? स्थानीय तह गठनको तीन वर्षका उपलब्धि के हुन् ? के अवको बाँकी कार्यकालमा हिजो जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसारका काम होलान् ? यस्तै बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापासँग राससले गरेको कुराकानीको अंशः
जब हामी तीन वर्ष अगाडि आम निर्वाचनमार्फत् निर्वाचित भएर काठेखोलामा आयौँ, त्यसपछिदेखि नै यस पालिकामा समस्याका चाङ पनि थिए र त्यही बीचमा हाम्रा अगाडि अवसरहरु पनि थिए । देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको थियो र हामी स्थानीय सरकारका रुपमा जनताका अगाडि आइसकेका थियौँ । प्रत्येक वडामा कच्ची सडक पुगिसकेको थियो । यसका लागि स्तरोन्नति गर्नु पनि थियो । खानेपानीका केही संरचना बनेका थिए र यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । केही वडा उत्पादनको चरणमा पुगेका थिए भने तिनका लागि बजारीकरणको खोजिमा थिए । शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या त्यस्तै थिए । यी समस्याकाबीच जब हामीले पहिलो बजेट प्रस्ताव गरियो यसले केही मात्रामा सहयोग पु-यायो ।
हामीले १२ महिना कच्ची सडक भए पनि यातयातका साधन गुडाउन प्रयत्त ग-यौँ तर प्रकृतिसँग जुध्न सकिएन । केही वडाबाहेक हामी सफल भयौँ । खानेपानीका समस्या समाधानका लागि एक घर एक धाराको कार्याक्रम अगाडि बढाएका छौँ, यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई जोडेर काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामी स्थानीय सरकारको हिसाबले निकै प्रयास गरिरहेका छौँ ।
आमूलपरिर्वतन गर्न नसकिए पनि केही मात्रमा परिर्वतनका परिणाम सतहमा देखिन थालेका छन् । पालिकाभित्रका विद्यालयमा सुशासनका केही अभ्यास हुन थालेका छन् । पठनपाठनमा सुधारका लागि हामीले धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ । कक्षा व्यवस्थापनदेखि विद्यालय प्रशासनलाई सुधारका लागि केही सफलता प्राप्त गरेका छौँ । प्रविधिमैत्री बनाउन प्रायः सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ । अध्यापन कार्यका लागि हामी धेरै प्रयास गरेका छौँ, जस्तैः सघन अनुगमन, नियमित लेखापरीक्षण, विद्यायल सुधार योजना निर्माण जस्ता क्रियाकलाप नियमितरुपमा अगाडि गएका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरुमा व्यापक सुधार गर्नुका साथै केही स्वास्थ्यचौकीमा ल्याबको स्थापन गरी परीक्षणको कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।
अति विपन्न र गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ । नियमित रुपमा स्वास्थ्यचौकीमा औषधि उपकरण नियमित रुपामा उपलब्ध गराएका छौँ । नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको पाँच श्याको अस्पताललाई सात श्ययामा व्यवस्थापन गरेका छौँ । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले गाउँपालिकाभित्रका सुत्केरी दिदीबहिनी, आमाहरुका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यस साथसाथै जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई ख्याल राखेर आम नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले एक वार्ड एक उत्पादनजस्ता आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।
हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरै पूरा हुन त नसके होलान् तर पनि जनताका गुनासालाई कम गरेका छौँ । सीमित स्रोत र साधन, सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कारणले पनि केही विकास निर्माणका कार्यमा अन्योल हँुदाहुँदै पनि काठेखोला गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको हैसियतले जनताका आवश्यकतामा ध्यान दिएका छौँ । विकास निर्माणका कार्यले आकार लिन थालेका छन् ।
काठेखोला गाँउपालिका आफैँमा आफ्नो आम्दानी कमजोर भएको पालिका हो । न यसको कुनै प्राकृतिक स्रोत छ न यहाँ विभिन्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना नै छ । यसकारण पनि हामी यहाँका प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो भूगोलअनुसार आयमूलक कार्य अर्थात उत्पादनसँग जोडेर आम्दानी वृद्धिका क्रियाकलापमा जोड्न सकियो भने हामीले आफ्नो आयस्रोत बढाउन सकिन्छ भन्ने दृढसङ्कल्पका साथ आगाडि बढेका छौँ । साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि जागरण उत्प्रेरण गरिरहेका छौँ । गाउँपालिकाको स्रोत परिचालनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान पु¥याएका छौँ । जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ निजी तथा सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको अवस्था रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा अधिकांश युवा यो गाउँपालिकाबाट बाहिर छन् । उनीहरुको विप्रेषण सदुपयोग गर्ने केही नीति छ ?
अहिले गाउँपालिकाको अवस्था के हो ? सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार र कृषि तथा पर्यटनमा लगानी गर्न सकिएन भन्ने छ नि ?
सशसानका लागि काठेखोला गाँउपालिका बागलुङका १० स्थानीय तहमध्ये एक नम्बरमा आउँछ जस्तो लाग्छ । सेवा प्रवाहका हिसाबले हामी अगाडि छौँ । हाम्रा सबै काम अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरेका छौँ । आगामी तीन महिनाभित्र गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल ल्याउँदैछौँ यसले पनि एउटा इटा थप्ने काम गर्नेछ । त्यसकारण पनि सुशसान प्रवद्र्धनका लागि अधिक प्रयास गरेका छौँ ।
कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाले के–के काम गरेको छ ?